आउटबरो - आउटबरोमा योगदान दिनुहोस्
कृपया नोट गर्नुहोस्, कि आउटबेरो एक नाफा नकमाउने / गैर-सरकारी संस्था होईन, त्यसैले यो एक अमेरिकी कर लेख्न बन्द छैन। बरु तपाईले मैले / मैले अहिलेसम्म गरेको कुरा र हाम्रो दृष्टि र लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कस्ता योगदानहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यो बुटस्ट्र्याप सुरुआत मद्दतको लागि तपाइँ र समर्पित हो LGBTQ + ग्लोबल समुदाय जुन सामान्य साइट सदस्यहरूको लागि कुनै शुल्कमा पर्दैन। म र हामी प्रत्येक दिन तपाईंलाई दिन दिन्छौं। तपाईं आज आउटबोर समर्थन गर्न एक आर्थिक योगदान विचार?
कोभिडको प्रारम्भिक रोजगारदाता कुराकानी छुटकारा र जमेको बजेटको कारणले समाप्त भयो। आउटब्रो विश्वव्यापी सेवा हो LGBTQ + समुदाय र हाम्रो मोडेल रोजगारदाताले भाग लिनको लागि भुक्तानी गर्छन्। डेनिस भेल्को हप्ताको non दिन औसतमा १०-१२ घण्टा काम गरेर २ बर्ष भन्दा बढी समयको लागि नन स्टपमा काम गर्दैछ। तपाईंको उदार दानले आउटबरोलाई जारी राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ जबकि COVID पछिको अर्थव्यवस्था ठीक हुन्छ र रोजगारदाताले बजेट खुला गर्दछ ताकि तिनीहरू हामीसँग आउटबोरमा सामेल हुन सक्छन् र रोजगारदाताहरूले आर्थिक रूपमा हाम्रो विकासलाई समर्थन गर्छन्। आउटबरो, यसको मिसन र यसको दर्शनलाई सहयोग पुर्‍याउनु भएकोमा तपाईको विचारका लागि म नम्र भएर धन्यवाद दिन्छु।
हामी तपाईंको प्रतिक्रिया मनपराउँदछौं। तपाईं र समुदायलाई आउटबरो किन मूल्यवान छ?
के तपाईं साइटमा योगदानकर्ताहरूको पृष्ठमा सूचीबद्ध हुन खुला हुनुहुन्छ?
कृपया अनुकूलन रकम प्रदान गर्नुहोस्
अब योगदान दिनुहोस्